​प्रशासनका बुढा कर्मचारी बाईबाई ? | Seto Khabar
​प्रशासनका बुढा कर्मचारी बाईबाई ?
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले निजामती प्रशासनका पुराना कर्मचारीलाई बिदाई गर्ने योजना बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वायनको मौकामा प्याकेजसहित पुराना कर्मचारीलाई बिदाई गर्न लागिएको हो । संसदमा दर्ता भइसकेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी बिधेयकमा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याउन लागेको हो । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश प्याकेज ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि बिधेयकमा अवकाश प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन दिने उल्लेख छ । निजामती प्रशासनमा युवा कर्मचारीलाई भित्राउने योजनाका साथ यस्तो प्रस्ताव राखिएको सामान्य प्रशासन मात्तालयका एक कर्मचारीले बताए ।
खासगरी निजामती प्रशासनको तल्लो तहमा रहेका धेरै कर्मचारीहरु अल्छी छन् । कार्यक्रममा नबस्ने र अतिरिक्त आम्दानी हुने कार्यालयमा मात्र बस्न चाहने खालका छन् । तिनै कर्मचारीका कारण निजामती प्रशासन नै बदनाम छ । तर, निजामती प्रशासनमा नयाँ पुस्ताले धेरै आशा भने देखाउन सकेका छैनन् । तर पनि कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुअघि सरकारले बुढा कर्मचारीलाई अवकाश प्याकेज दिन लागेको हो ।
साथै उक्त बिधेयकमा कर्मचारीको भर्ना एक वर्षलाई रोक्ने प्रस्ताव समेत राखिएको छ । त्यस्तै खटाएको क्षेत्रमा ३५ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तीको प्रस्ताव समेत छ । जसप्रति धेरैले बिरोध जनाएका छन् ।